Guddoomiyaha gobolka Banaadir oo dalka dib ugu soo laabtay
May 11, 2012 Markacadeey
Kadib safar shaqo oo qaatay muddo usbuuc ah oo dalka Turkiga uu ku tagay wafdi uu hogaaminyay duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir mudane Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay.
Safarka shaqo ee wafdiga duqa Muqdisho ayaa socdaal qaatay muddo usbuuc ah waxa ay ku tageen magaalada Istanbul kadib caasumaad rasmi ah oo ay ka heleen duqa magaaladaas.
Waxaana kulamo dhex maray wafdiga duqa magaalada Muqdisho iyo masuuliyiinta dowladda hoose ee Istanbul kadib la isku afgartay in la mataaneeyo magaalooyinka Muqdisho iyo Istanbuu.
Duqa magaalada Muqdisho ahna guddoomiyaha gobolka Banaadir oo saxaafadda hadalo kooban ku siiyay gudaha garoonka diyaaradaha caalamiha ah ee Aadan Cadde wax yar kadib markii uu soo dagtay ayaa sheegay in safarkiisa uu ahaa mid guul weyn ay uga soo hoyatay magaalada Muqdisho kadib markii magaalada Istabul ee dalka Turkiga ay soo codsatay in lala mataaneeyo Muqdisho.
Waxaana garoonka diyaaraha caalamiga ah ee Aadan Cadde magaalada Muqdisho kusoo dhoweeyay guddoomiyaha gobolka iyo wafdigiisa masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka, saraakiil, xildhibaano iyo qeybaha shacabka reer Muqdisho.